1 Korintiana 4 - Ny Baiboly
6Ary noho ny aminareo, ry rahalahy, dia nahodiko mankamin'ny tenako sy Apolo izany zavatra izany, hianaranareo ao amin'ny tenanay tsy hanao mihoatra noho izay voasoratra, mba tsy hoentim-piavonavonana hianareo hanandratra ity, nefa hanetry an'irý kosa. 7Fa zovy moa no manambony anao noho ny hafa? Ary inona no anananao ka tsy noraisinao? Ary raha nandray hianao, nahoana no dia mirehareha toy ny tsy nandray iny? 8Efa voky sahady mantsy hianareo izany e! Efa manan-karena sahady à! Efa manjaka lavitra anay! Enga anie ka ho izany tokoa hianareo, mba hiarahanay manjaka aminareo. 9Fa izahay Apostoly, araka ny fijeriko ny tenanay, dia hoatra ny nasehon'Andriamanitra ho olona faraidiny sy toy ny voaheloka ho faty, natao fizàhan'izao tontolo izao, na anjely, na olombelona. 10Izahay moa, adala noho ny amin'ny Kristy, hianareo kosa hendry ao amin'ny Kristy! Izahay osa, fa hianareo no matanjaka; izahay faneso, hianareo kosa fanaja. 11Mandraka ankehitriny, dia noana izahay, mangetaheta, tsy manan-katafy, fatsahana totohondry, tsy manana antom-ponenana, 12ary misasatra miasa amin'ny tànanay. Ozonina izahay, misaotra; enjehina, mandefitra; endrikendrehina, milefaka; 13mova tsy izahay iny no fakon'izao tontolo izao, sy faditry ny olona rehetra, mandraka ankehitriny izao.
14Tsy ny hampahamenatra anareo anefa no nanoratako an'izany, fa ny hananatra anareo, toy ny zanako malalako. 15Satria na dia ho iray alina aza ny mpampianatra anareo ao amin'ny Kristy, dia tsy maro ray hianareo, fa izaho ihany no niteraka anareo tamin'ny Evanjely ao amin'ny Kristy. 16Koa mihanta aminareo aho, aoka ho mpaka tahaka ahy hianareo, toy ny nianarako ny Kristy koa. 17Fa izany ihany no nanirahako ho etý aminareo an'i Timote, zanako malalako sady mahatoky ao amin'ny Tompo, mba hampahatsiaro anareo izay làla-nodiaviko ao amin'ny Kristy, sy izay fampianarana fanaoko hatraiza hatraiza amin'ny Eglizy rehetra. 18Misy mirehareha satria ataony fa tsy ho tonga any aminareo intsony aho; 19ho avy faingana anefa aho, raha sitraky ny Tompo, ka tsy ny fitenin-dry zareo mirehareha no ho hitako, fa ny asa vitany, 20satria ny fanjakan'Andriamanitra tsy teny foana fa asa atao. 21Inona àry no tianareo? Tsorakazo ve no hoentiko mankany aminareo, sa fitiavana sy halemem-panahy? >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.1216 seconds